Mortgage Evumayo ukwakha indlu
Dream siqu indlu live ngokushintsha imisebenzi kungaba yimpumelelo, ngisho noma ungenayo imali eyanele yokwakha. Kuyinto ngokwanele ukuba uxhumane omunye amabhange, kanye lolu hlobo boleko mortgage ukwakha indlu, uzobe okuqinisekisiwe ukuba ikhishwe. Futhi, lolu hlobo abolekise ingatholakala ngokusebenzisa nomdayisi. Konke kuncike kulokho umlando wakho wokuthenga ngesikweleti, okungukuthi, kanye singakanani isikhathi uzimisele ulithola.
Izinzuzo nezingozi nebubi lezi iziphakamiso
Senza out yibhange imali.
Ukuvula ebhange futhi isicelo loan, kanye ukulungiselela yonke imininingwane ebalulekile, kufanele ngilinde isikhathi eside.
Kulokhu, ukuthola imali-mboleko ezifana mortgage ngokwakhiwa, kuzodingeka ukuba unikeze inombolo enkulu kwemibhalo, futhi ngenxa yalokho ukuchitha isikhathi esiningi. Kodwa kukhona esinye plus. Siqukethe eqinisweni lokuthi ibhange senzalo ku bengatshelekwa ukwakha indlu waba ngaphansana ukuthi we broker, futhi kuphela ngoba broker, uma isicelo kuso, owenza wonke umsebenzi ukuthola imalimboleko evumayo ngawe. Ngakho-ke, abaningi namuhla bakhetha ukubhalisa bese uthola loan ngokusebenzisa nomdayisi. Eqinisweni kunezizathu eziningi, okuyinto sizothula kamuva.
loan 2.Oformlyaem ngokusebenzisa nomdayisi.
Ake uqale nge yokuthi igama elithi "nomdayisi" libhekisela inkampani ezikhethekile, umgomo wakhe oyinhloko ukusiza iklayenti ekutholeni yibhange imali. Kwenza ukuphila lula nje kuphela kulabo akusebenzi ngasizathu simbe ngqo ebhange ukuthatha leli phepha ukuze bangabhekani, like a mortgage ukwakha indlu, kodwa futhi kulabo ungafuni ukuchitha isikhathi esiningi ngokuphathelene nakho konke lokhu wamaphepha. Ngakho-ke, ukuze uthole loan ngokusebenzisa nomdayisi, ningaqiniseka ukuthi amasevisi alandelayo:
a) okunokwethenjelwa mortgage nomdayisi khetha mortgage ezifanele kakhulu kuwe. Ukuze omningi ababoleka mbuzo obalulekile kakhulu njalo ukukhetha abolekise enenzuzo kakhulu. Okungukuthi, abangabantwana nomdayisi igxile ikhono lakho ukukhokha credit nyangazonke namalungelo maqondana ekhaya uthenge.
b) ngendlela efanele futhi ngokushesha ukubeka umyalelo. Ukwazi yonke imininingwane yezimfuneko ababoleka kunoma iyiphi enye yasebhange mortgage nomdayisi uzokwazi ukukhombisa candidacy yakho kuthabathela ecaleni engcono ukubeka lonke iphakethe kwemibhalo edingekayo. Umehluko phakathi indlela udonsa i amateur futhi njengoba uchwepheshe uqhuba ibhizinisi, ke inkulu kakhulu futhi zingaba nkulu ngempela eningi.
c) Lungiselela a nesivumelwano sokubolekwa imali emva ukubala kanye nenani sezingxoxo Nenkampani iklayenti. Ngokwezibalo, inani izinqumo ezinhle zokusebenza loan oluthunyelwe prof. wabathengi, 30-40% ephakeme kunaleyo ngesicelo yemvelo abantu ababoleka.
g) Ukonga okukhulu phezu yenkokhelo yekhadi.
Mortgage abolekise lapho mortgage ikhishwa ukuze kwakhiwe indlu yezwe - inqubo kunalokho nzima, kanye izindleko abatshelekayo ayigcini izinkokhelo zenyanga. Ngakho-ke, noma kunjalo ikakhulukazi bayoba esiyingqayizivele. Broker siyofeza izibalo ezidingekayo futhi ukuthola "izingibe" kungenzeka esivumelwaneni ezihlongozwayo. Ngemva kokuhlola idatha isivumelwano mortgage ne benzuzo kwikhasimende.
e) Ukuze afeze refinancing kuthengiselana (uma izinga iconsi ku loan). Russia manje isimiso refinancing, futhi isevisi ngenkuthalo esetshenziswa futhi ithuthukiswe zonke wabathengi mortgage. Is they ukuthatha esithwele umnyuziki aphume ukuthengiselana ezihlobene refinancing. Okusho ukuthi, uma inani lenzalo uwela, inkampani ngeke recalculate mortgage inkontileka.
e) Thola athembeke kakhulu yomuntu obolekisayo. Lokhu, ongayikuvuma lenqabe ukukhiphela loan. Nokwenqatshwa kokunikezwa imali-mboleko kumuntu noma obungokomthetho - lena ngempela isimo ezivamile ebhange. Futhi kukhona okuningi izizathu. Nansi into yabo futhi kungaba kalula futhi ngokushesha ukuqeda broker indlu, ubani othatha umthwalo egcwele.
Zonke izinzuzo isikhalazo ukuze mortgage wabathengi i "mortgage ukwakha indlu" khona. Ngakho-ke. Uma unesithakazelo sipho, siyojabula ukusiza kule ndaba, sicela uthintane!
Indlela ukwehlisa izinga ku mortgage ku Savings Bank? Imibandela yokuthola bengatshelekwa ku Savings Bank
Iphalishi e multivarka: ukupheka izimfihlo
Ikhamera compact Panasonic LUMIX LX7: ukubuyekezwa abanikazi
Gagra zokungcebeleka iyindawo enkulu